Uyijikeleza njani ividiyo kwikhompyuter yakho okanye kwiselfowuni- Izidalwa ezikwi-Intanethi
Nokuba sinefayile kwikhompyuter yethu okanye sinayo kwiselfowuni, ngamanye amaxesha ikwindawo engalunganga. Kwaye ukuba sijonga indlela yokujikeleza ividiyo, sibona iindlela ezahlukeneyo ezingacacanga. Abanye bacacisa indlela yokwenza ngeselfowuni, abanye ngekhompyutha. Abanye bakunika enye indlela kwi-iOS okanye kwi-Android kwaye kwimeko yeekhompyuter, iiWindows okanye iiMac.Ngoko ke kunzima kakhulu ukusuka kukhangelo ukuya kwisisombululo esifunwa nanini na.
Ngenxa yale ngxaki ivela kwi-Intanethi kwi-Intanethi sifuna ukulungisa lo mbandela. Ukutshintsha amaqonga awahlukeneyo, ukuze xa ufika kule ngxaki, ngokujonga nje uphendule lo mbuzo. Ukumakisha ezi ntlobo zezinto njengezintandokazi kuya kuza kuluncedo kwixa elizayo, ukuba awukhumbuli naziphi na izicelo okanye iifom. Ukujikeleza ividiyo kunamathuba amaninzi, ngaphandle kweintanethi nakwi-intanethi. Kukuphi okulula?
1 Jikelezisa ividiyo kwikhompyuter yakho
2 Jikelezisa ividiyo ekwi-intanethi
3 Jikelezisa ividiyo nge-smartphone
3.1 Ukusetyenziswa kwePhone
3.2 Usetyenziso lwe-Android
Jikelezisa ividiyo kwikhompyuter yakho
Inkqubo ekhethekileyo yeMac ayifani naleyo yeWindows. Akunayo nenkqubo esetyenziswa kuwo omabini amaqonga afanayo. Inye nganye inokuthintelwa kwayo kwaye 'iqhinga'. Siza kubona nganye yazo kumanyathelo amancinci njengoko inokwenziwa, kunye neenkqubo ezisebenza kakuhle ngaphandle kwesidingo somgca, kodwa ezintsonkothileyo ukwenza imisebenzi ethile. Kwimeko apho kufuneka ujikeleze ividiyo enobunzima obukhulu, iya kuba yeyona ndlela ilungileyo, kuba, ukuba siyazama online ixesha elithathayo linokucaphukisa.
Kusetyenziso lwe-mac siza kusebenzisa i-Final Cut Pro X: Sikhetha ividiyo yethu kwaye siyingenisa kwi-timeline yethu. Nokuba unokukhetha: Ifayile> Ngenisa okanye ngokutsala uye amxesha ngqo. Nje ukuba ividiyo yethu ingeniswe ngaphakathi kwaye ilungile -kungeniso olupheleleyo-, siye kwinxalenye efanelekileyo yenkqubo. Apho siza kubona i-icon ye 'movie tape' ebizwa ngokuba 'ngumhloli wevidiyo'.
Cofa ukhetho 'lweNguqu' emva koko masiye 'Ujikelezo'. Ngoku siya kujika ukungcamla, ivili linyuke okanye lihle. Nangona sinokubhala nenani lotyekelo esiza kulidinga. Kodwa ngesiqhelo iya kuba kwizakhelo eziqhelekileyo njenge-270º, 90º, 180º kunye no-0º.
Ukuba sisebenzisa iiWindows, sinokusebenzisa iSony Vegas: NjengakwiCandelo lokuGqibela, siya kongeza ividiyo yethu ejikelezayo kumda wexesha weSony Vegas. Nje ukuba sikwenze oku, kuya kufuneka siye kwiFayile> kwiPropathi. Kwiipropathi zenkqubo siza kubeka ubukhulu ngokungafaniyo. Oko kukuthi, ukuba bakwi-1024 × 720, siya kubabeka ku-720 × 1024.
Ke, ubungakanani bevidiyo buya kufana kodwa ngokujika ngokuchanekileyo. Ukugcwalisa olo jiko, siya kumda wexesha nakwikona esezantsi ekunene yeprojekthi yethu, i-icon esiyibiza ngokuba 'kukukruna okanye ukusika umsitho'. Sinqakraza ngeqhosha lasekunene kwaye kukhetho 'tshatisa into ephumayo'. Sihlengahlengisa ngokujikeleza ngesandla okanye kwakhona sibeke iidigri ngenani. Nje ukuba ihlengahlengiswe kakuhle nesisombululo seprojekthi, siya kuba nevidiyo ekulungele ukuthunyelwa ngaphandle.
Jikelezisa ividiyo ekwi-intanethi
Iinkqubo ezikwi-Intanethi zinokungathembeki kwiiprojekthi zevidiyo ezinzima. Oku kuxhomekeke kwiimpawu zekhompyuter, i-intanethi kunye newebhusayithi uqobo. Yindlela esetyenziswa njengenye yeenkqubo ezichazwe apha ngasentla, kuba, ukuba ividiyo encinci, iyakusombulula impazamo ngokukhawuleza kwaye awuzukufuna lwazi olukhulu ukuyenza.
Kodwa kule meko, Siza kongeza umzekelo onokukugcina nangaliphi na ixesha. Oku kubizwa ngokuba: Jikelezisa ividiyo. Yinto elula ukuyichaza kwaye akuyi kufuneka siyeke ixesha elide. Njengoko ubona emfanekisweni, nokuba ividiyo ikwiwebhu okanye unayo kwikhompyuter yakho, vele uyilayishe. Ngokusebenzisa i-url okanye ngefayile .mov umzekelo. Ukhetha ifomathi yevidiyo oyifunayo, bonisa icala oya kulo ukuze ujikeleze kunye nohlobo loxinzelelo. Ukuphakama kolu hlobo, ubuncinci bevidiyo obuya kuba nayo kunye nevolumu encinci ekuhlala kuyo, ngokuchaseneyo, iya kuba nzima.
Jikelezisa ividiyo nge-smartphone
Kukho iindlela ezizezinye ze-iOS kunye ne-Android. Nangona abanye ekuhlaleni kwivenkile nganye bengenazo uphononongo olukhulu. Ukubeka umzekelo weprojekthi nganye, siza kugxila kwelona gxeko lihle.
Xa ubeka 'ukujikeleza iividiyo' kwiVenkile yeApple kulula kuthi ukuba sicofe ngaphandle kokujonga ukuthengwa kokuqala. Oku kuyenzeka xa 'sithandana' ukulungisa loo mpazamo kwividiyo yethu. Kodwa saphoxeka kukuqala kwaye ... amava ethu anokukhathaza.
Isicelo esiza kucebisa ngaso Jikelezisa ividiyo ukugxeka kwabo kunye nokusetyenziswa kwethu esizame kuko inShot-Umhleli weVidiyo
«Kulula kakhulu ukusebenzisa kwaye iApp epheleleyo. Ndicebisa 100% !!. Uluvo lwabathengi
Ngokusengqiqweni, ewe ezi zicelo zingasentla azisimahla, ezi azizukuncipha. Ungabazama kwaye ubone ukuba banjani ukuze babone ukuba iyakuqinisekisa na. Kodwa ayisosicelo sokusetyenziswa okukodwa sokujikeleza ngokukodwa, njengoko inempawu ezintle zokuhlela ividiyo. Ixabiso elisisigxina lesicelo lijikeleza i- € 33,00. Kodwa ungathenga amanqaku ahlukeneyo nge-euro engaphantsi kwesithathu, eya kukuvumela ukuba ube nokufikelela okulinganiselweyo. Oku kuya kuxhomekeka kwinto oyisebenzisela yona kwaye unokufuna kuphela ukuvula enye yazo.
Ukuba kwimeko yakho awunayo ikhompyuter okanye ukufikelela kwi-iOS kunye nento onayo I-smartphone ye-Android yokwenza wonke umsebenzi wakho, olona khetho lucetyiswayo Jikelezisa ividiyo yeFX. Ingcali ngakumbi kuneefoto zikaGoogle, nangona imisebenzi emincinci, nkqu neefoto zikaGoogle zinokukunika ukhetho. Njengakwi-iOS, esi sicelo sibonelela "ngokuthenga kwangaphakathi nohlelo".
Yenzelwe ngokukodwa ukuba iflip iividiyo, kwaye ikuvumela ukuba ujikeleze zombini iividiyo esinazo kwigalari kunye neevidiyo esiza kuzirekhoda ngalo mzuzu kanye. Oku kuluncedo kakhulu xa kufuneka sibhale phantsi into ngokukhawuleza kwaye akunakwenzeka kuthi ukuba siqashele indlela efanelekileyo yokurekhoda kwimizuzwana embalwa. Ngoku asikhathali njengoko ujikeleze iVidiyo yeFX iya kuba nakho ukuyilungisa kwimveliso yePost.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyijikeleza njani ividiyo kwikhompyuter yakho okanye iselfowuni
I-Adobe ihlaziya ii -apps zayo zokuhlela ividiyo kwiselfowuni